Photoshop ကျွမ်းရုံနဲ့ ဒီဇိုင်နာဖြစ်ပြီလား - MYSTERY ZILLION
Photoshop ကျွမ်းရုံနဲ့ ဒီဇိုင်နာဖြစ်ပြီလား
October 2009 edited March 2011 in Photoshop
ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး စကား၀ိုင်းလေးတစ်ခုလောက် စလိုက်ကြရအောင်လား။ ကျွန်တော်ကပဲ စတင်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အပါအ၀င် ဒီဇိုင်နာအတော်များများက Photoshop ဆော့၀ဲလ်လေး အတော်အသင့် သုံးတတ်ရုံနဲ့ ဒီဇိုင်နာဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်း အရေးအကြောင်းနဲ့ (ဒုနဲ့ထည်နဲ့) လုပ်ပြရမယ့် ဒီဇိုင်းမျိုးဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် creative ဒီဇိုင်းတွေလုပ်ရတော့မယ််ဆိုရင် ဗျာများရလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Effect တွေ၊ Background Image တွေအဆင်သင့်ရှိမနေဘူးဆိုရင် ပိုပြီးတော့တောင် အခက်ကြုံရသေးတယ်။ အရောင်အယူအဆတွေ၊ အထားအသိုတွေကအစ သုံးနေကျကိုပဲ ထပ်တလဲလဲအသုံးပြုနေရပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ဘောင်တန်းနိုင်အောင်၊ ဆန်းသစ်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေ ဖန်တီးနိုင်ဖို့ ဘာတွေလိုမလဲ၊ ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမလဲ။ ဖိုတိုရှော့တင်မဟုတ်ဘဲ တခြား ပုံနှိပ်စက်၊ ဖလင်၊ ဓာတ်ပုံရွေးချယ်မှုစသဖြင့်ပေါ့။ သူငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ ကိုယ်သိထား၊ လေ့လာထားတာတွေကို ေ၀မျှပေးစေချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အတုယူစရာကောင်းတဲ့ Graphic Design လေးများကိုလည်း မျှေ၀ပေးစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က ဒီဇိုင်းကိုခုမှစလေ.လာနေတာပါ။ဒီပို.ကိုစိတ်၀င်စားပါတယ်။ကျွန်တော်က ဘာမှမတတ်လို. ၀င်တော.ဆွေးနွေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဒါပေမယ်. စိတ်၀င်တစား လာဖတ်ပါ.မယ်။
Design ပိုင်းကို သိလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် designer ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ photoshop နဲ့တင် မလုံလောက်ပါဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် adobe creative suite အကုန်နီးပါး ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် သုံးနိုင်ရင် ပိုပြီးတော့ သင့်တောှပါလိမ့်မယ်။ (နဲနဲများသွားလားမသိ - ပြန်လျှော့ကြည့်လိုက်မယ်။ အနည်းဆုံးတော့ illustrator, photoshop + corel draw လောက်ဆို တောှတောှလုပ်နိုင်ပြီထင်ပါတယ်။:) ) ကိုယ်ပိုင် design ကို သူများတွေကိုပြမယ် သူများတွေ design ကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ deviantart မှာ member ဝင်ထားပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ deviantart ကနေမှ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ designer တွေ blog အထိသွားရောက်ပြီးတော့ tutorials တွေ လေ့လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Designer တွေအတွက် အရေးကြီးဆုံး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ font design တွေ လိုချင်ရင် ရှာလို့ ရနိုင်မယ့် ဆိုဒ်တစ်ချို့ စုထားလိုက်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ဖောင့်တွေက free ရတာရှိသလို တစ်ချို့ကတော့ ဝယ်မှ ရတာတွေရှိပါတယ်။ free download ပေမယ့်လည်း စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းသုံးအဖြစ်နဲ့ ခွင့်မပြုတာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ (ကိုယ့်ဆီမှာတော့ copyright က အရေးမပါသလို ဖြစ်နေတော့လည်း သုံးချင်သလို သုံးလို့ရနေပြန်ရော)
အဓိက လိုအပ်တာက တော့ အတွေ့အကြုံပေါ့
တကယ်တော့ တကယ့်ဒီဇိုင်နာအစစ်အမှန်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ နေရာဒေသအလိုက် ဒီဖိုင်နာတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကလည်း မတူညီကြဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာ ဒီဖိုင်နာတစ်ယောက်ဟာ ဒီဖိုင်းလုပ်ရုံပဲတဲ့။ Creative ဖြစ်အောင် စဉ်းစားပေးတာက Creative Designer သီးသန့်ရှိတယ်။ ဒီဇိုင်းကို အဖွဲ့လိုက်လုပ်ကြယ်။ ကျွန်တော်စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်တိုင်Creative ရော Design ရော အကုန်လုပ်ရတယ်။ တစ်ယောက်တည်းလုပ်နိုင်ရင် တစ်ယောက်တည်းလုပ်လို့ရတယ်။ ဒီတော့ တာ၀န်ပိုကြီးတယ်။ ပိုသိထားရတယ်။ တော်သေးတာက မြန်မာနိုင်ငံက ဒီဇိုင်းအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက အရမ်းကြီး စစ်စစ် ပေါက်ပေါက်မလုပ်ကြလို့။ တကယ့်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်က ဘာBackground photo မှ မရှိလည်း ရှိတဲ့ Font လေးနဲ့တင် ဒီဖိုင်းကို လှအောင်လုပ်တတ်ကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အဲဒီလိုဒီဇိုင်နာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီဇိုင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးတဲ့အခါ Software နည်းပညာပိုင်းက အရေးကြီးတယ်ဆိုပေမယ့် အနုပညာမြောက်အောင် ဖန်တီးလုပ်ဆောင်နိုင်မှုက ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ နည်းပညာကို တတ်ပြီး အနုပညာမြောက်အောင် မဖန်တီးနိုင်ရင် အဲဒီလူက ဒီဇိုင်နာမဖြစ်ဘဲ သင်တန်းကျောင်းက သင်တန်းဆရာပဲဖြစ်ဖို့ များနေလို့လေ။ ကျွန်တော်ပြောတာ မှားချင်လည်း မှားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး။ ဒီဇိုင်းတစ်ခုနှစ်ယောက်လောက်ကို ယှဉ်ပြပြီး အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေကို ပြောပြဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် ပိုပြီး အကျိုးရှိမယ်ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်ကတော့ သိပ်ပြီးအဲလို မဆွေးနွေးပြတတ်ဘူး။ ကိုယ်စိတ်ထဲ သိထားတာလေးတွေ ဆွေးနွေးပေးကြပါဦးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
photoshop တတ်ရုံနဲ့တော့ designer မဖြစ်ပါဘူးဗျာ ... photoshop မှ မဟုတ်ဘူး၊ Illustrator , Corel , Maya , Studio Max စတဲ့ software တွေ သုံးတတ်ရင်လဲ designer မဖြစ်ပါဘူးဗျာ ... software တွေက Tools သက်သက်ပဲ။ တူ၊ ဆောက်၊ လွှ စတဲ့ Tools တွေကိုင်တတ်ရုံနဲ့ ပန်းပုမထုတတ်သလို .... software သုံးတတ်ရုံနဲ့ designer ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
burger ကို လူတော်တော်များများလုပ်တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် McDonalds လို နာမည်ကြီးဖြစ်လာအောင် မလုပ်နိုင်ဘူး။ Cola ကို အချိုရည် company တော်တော်များများက ထုတ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Coca Cola နဲ့ Pepsi လို နာမည်ကြီး ဖြစ်အောင် မလုပ်နိုင်ဘူး။ Photoshop Tool ကို သင်ရုံနဲ့တတ်နိုင်တယ်။ ကိုင်တတ်ရုံနဲ့ Designer မဖြစ်ဘူး။
ပြောင်းပြန်တွေးခဲ့ဦးမယ် Art အခြေခံလည်းရှိမယ်လေ့လာဖူးမယ် Creative လည်းဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဒီဇိုင်နာလို့တော့ခေါ်လို့ ဖြစ်ပြီပေါ့ သို့ပေမယ့် Tools တွေကိုမသုံးတတ်ပြန်ရင်လည်း တော်တော်ဂွကျမယ်ထင်တယ် သုံးတတ်တဲ့လူခေါ်ခန့်ထား ကိုယ်ကပြောပြီးခိုင်း ကိုယ်ပြောတဲ့အတိုင်းမထွက်တော့ စိတ်တိုင်းကမကျနဲ့ ဟိဟိ။:D
ဦးဦးစေတန်က အခုတစ်လော ဥပမာတွေက လန်းနေပါလား ... ဘာဂါတောင် စားချင်လာပြီ ... တစ်လုံးပို့ပါဗျို့ ...
ကျွန်တော့်အထင်တော့ ဒီဇိုင်နာအဆင့်ဆိုတာ အသစ်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အဆင့် ပြောရရင် Creativity ကောင်းတဲ့အဆင့်ကို ခေါ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူများဆွဲထားတဲ့ဟာတွေကို တူအောင်တုပြီး ဆွဲနိုင်တဲ့သူတွေ တကယ့်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ဒီဇိုင်းတွေကို တုပြီးဆွဲနိုင်တဲ့သူတွေ လည်း ဒီဇိုင်နာတွေပဲလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အဆင့်သတ်မှတ်ရတာ ခပ်ခက်ခက်ပါပဲ ...
photoshop တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ လုံး၀ မဖြစ်နိုင်ပါ.
ဟုတ်ပြီ designer ဆိုလို့ ၊ designer အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
creative ,graphic , production, etc.. အမျိုးမျိုးပါ.
ဘယ် desginer မှ software တစ်မျိုးကောင်းတတ်ထားလို့မရပါဘူး
software တစ်မျိုးတော့ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တတ်ရမယ့်အပြင် နောက်ထပ် softwares တွေလဲ basic လောက်တော့သိထားသင့်ပါတယ် ဥပမာဗျာ graphic designerအတွက် ဆိုပါတော့ photoshop ကျွမ်းတယ်ထားပါ ၊ နောက်က AI ဖြစ်ဖြစ် coreldraw ဖြစ်ဖြစ် basic တော့ဆွဲတတ်ရပါမယ်
ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ customer က designအပ်ရင် ဘယ်ဆိုင် ဘယ်company ကမှ 3D မပြပါဘူး
2D နဲ့ပဲ ပြီးသွားတတ်ပါတယ်၊ international မှာအဲဒီလိုမရပါဘူး 3Dက အစ 2D production drawing(Detial drawing) အဆုံး customer approve ဖြစ်မှ လုပ်ငန်းစလို့ရပါတယ်
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ graphic designer များအနေနဲ့ autocad, 3D max , Photoshop, AI, INDESIGN အားလုံးနီးပါးလောက်ကို တတ်အောင်လေ့ကျင့်ကြပါ၊ ဒါမှ နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်ရှာတဲ့အခါ အဆင်ပြေပြေ လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်.
အခုလို ၀ိုင်း၀န်းဆွေးနွေးပေးကြတဲ့အတွက် အရမ်း၀မ်းသာတယ်ဗျာ . .မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဒီဇီုင်နာလက်သစ်တွေက ဖလင်၊ ပုံနှိပ်စက်ကဏ္ဍတွေကို သိပ်မသိကြဘူးဗျ။ ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဟာ ဒါတွေ ဘယ််လိုရှိတယ်ဆိုတာ သိထားသင့်တယ်ဗျ။ ဖလင််ဆိုရင် Positive, Negative ဆိုတာကအစ Line ဘယ်လောက််နဲ့ထုတ်ရင် ဘယ်လိုစက္ကူနဲ့ရိုက်မှ၊ Resolution ဘယ်လောက်ထားမှဆိုတာ နှံ့ နှံ့ စပ်စပ် သိပ်မသိကြဘူးဗျ။ ဟဲဟဲ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပါအ၀င်ပေါ့ဗျာ။ မဂ္ဂဇင်း Flat တွဲရင် ဘယ်လိုတွဲရမယ်၊ ဘယ်နှချိုးလည်းဆိုတာကအစ သိပ်ပြီး မသိကြသေးဘူး။ သူ့ဟာနဲ့သူ လုပ်မယ့်သူတွေ ရှိနေတော့ မသိလိုက် မသိဘာသာ နေနေကြတယ်။ အဲဒီအပိုင်းလေးတွေလည်း ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး။ ဒါက ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်အတွက် မသိမဖြစ် သိနေရမယ့် အပိုင်းမှာ ပါနေတယ်လေ။
အပေါ်က ညီအစ်ကိုတွေပြောသွားတာကို သေချာဖတ်ကြည့်ရင် ပြည့်စုံနေပါပြီ။ Photoshop တစ်ခုထဲနဲ့တော့ Designer လို့ပြောမရပါဘူး။ Adobe Creative Suite ထဲက Illstrator, Indesign လောက် အနည်းဆုံး တီးမိခေါက်မိ(တော်တော်လေး တီး။ တော်တော်လေး ခေါက်)ရှိရပါမယ်။ ဒါ့အပြင် Corel နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Corel Draw, Corel Paint တွေကိုလည်း နားလည်ထားသင့်ပါတယ်။ ၄င်းနည်းတူ software များကိုလည်း မျက်ခြေမပြတ်ပဲ လေ့လာသင့်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ Art Work ပါပဲ။ ဒီဇိုင်းလာအပ်သည် ဖြစ်စေ ။ မအပ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်စိတ်ကူးပေါ်တဲ့ ဒီဇိုင်းလေးတွေကို စမ်းသပ်နေ သင့်ပါတယ်။ အခုခေတ်စားနေတဲ့ printer တစ်လုံး။ scanner တစ်လုံးနဲ့ ဓာတ်ပုံပြင်ရုံကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ Art Work ပါ။ ကိုယ်တိုင် တွေးတော စဉ်းစားထားသော Design လေးများဖန်တီး ကြည့်ပါ။ ဒါ့အပြင် မိမိ ပတ်၀န်းကျင်က commercial design လေးများကိုလည်း မိမိသာဆိုလျှင် မည်သို့ မည်ပုံ လုပ်မည်ဟု စဉ်းစားပြီး အသစ်ဖန်တီးကြည့်ပါ။ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပါမယ်။ ကျွန်တော့် ဆီကိုလည်း အချိန်မရွေး ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စာနယ်ဇင်းဒီဇိုင်းတွေ ဆွဲလာတာတော့ကြာပါပြီ။ ဒီဇိုင်းနာလို့ မပြောရဲသေးပါ။ နောက်ပေါက် ညီလေးများလည်း အင်မတန်မှ တော်ပါသည်။ အားလုံးတိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ လုပ်လျှင် ပိုပြီး အသစ်အဆန်းများဖန်တီးနိုင်မည်ဟုထင်ပါသည်။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမည်ဆိုလျှင် [email protected] ပါ။ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်သိ သူ့ပြော သူသိကိုယ့်ပြောတိုင်ပင်မှ တိုးတက်ကြမှာ မဟုတ်လား။
Photoshop & Corel Draw ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် တတ်ထားသင့်ပါတယ် ဒါမှ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါမှာပါ
စက်ကူဆိုင်လောက အသုံးနှုန်းတွေနဲ့ ပုံနှိပ်တိုက်အသုံးအနှုန်းတွေ အတိုင်းတာလေးတွေ အခေါ်အေ၀ါ်လေးတွေ မသိခဲ့ရင် ကိုယ့်ဒီဇိုင်းကို အရွယ်စား ပြန်ပြင်ရတာမျိုး
ပြန်မပြင်ချင်လို့ ဇွတ်ထုတ်လိုက်ရင်လည်း စက်ကူအလေအလွင့်များ ဖြစ်ပြီး အရှုံးအမြတ်တွက်မရဖြစ်တတ်ပါတယ်/ များသောအားဖြင့် ပုံနှိပ်တိုက်တွေမှာ Legal size လောက်ရှိတဲ့ စာ၇ွက်ကို ၁၁ချိုး လို့ခေါ်ပါတယ်
စာရွက်ကြီး ၁ ရွက်ကို ၁၁ ရွက်ဖြစ်အောင်ဖြတ်ထားလို့ပါ အေဖိုးဆိုက်ကို သုံးလေ့သုံးထမရှိပါ စကဿကူအခေါ်အေ၀ါ်လေးတွေမသိထားရင်လည်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ စကဿကူကို အတော်နဲ့ ရှာမရဖြစ်တတ်ပါတယ်
ကာလာခွဲရာမှာလည်း ပုံနှိပ်တိုက် လုပ်ရကိုင်ရလွယ်အောင် လုပ်ထားမှ ပုံကောင်းကောင်းထွက်နိုင်မှာပါ သေးသေးမွားမွား စာလုံးလေးတွေကို တစ်ရောင်ထည်းသုံးခြင်းမျိုး အနက်ရောင်စာလုံးများသုံးထားရင် အခြား ၃ရောင်မှာ ပါတဲ့ အပေါက်တွေကို ပြန်ပိတ်ပေးခြင်းမျိုး မာဂျင်ကို ၅မူး နှင့်အထက်ချန်ပေးခြင်းမျိုး
စာလုံးပေါင်းစစ်ခြင်းပါ စာစစ်အတွေ့ကြုံနည်းရင် အရမ်းအမှားများတတ်ပါတယ် ဒီနေရာမှာ အရမ်းစိတ်ရှည်ရပါတယ် ဒီဇိုင်းဆိုတာ စာနည်းနည်းလေးနဲ့ စာလုံးပေါင်းမှားသွားရင် အရမ်းအရုပ်ဆိုးပါတယ် အဓိပဿဿပာယ်လည်း လွဲသွားနိုင်ပါတယ်
ဒီလောက်ကြီးပြောပြနေရတာ ဗမာပြည်က ဒီဇိုင်နာတော်တော်များများဟာ ဒီဇိုင်းဆွဲ ဖလင်ထုတ် Offset တင် စကဿကူ၀ယ် Binding အပ် Cutting စတဲ့ လုပ်ငန်းအားလုံးကို တစ်ယောက်တည်း တာ၀န်ခံရတာများလို့ပါ ဒီဇိုင်နာအနည်းစုလောက်ပဲ TEAM နဲ့ လုပ်နိုင်တာပါ
သေချာတာတစ်ခုကတေ့ာ တစ်ယောက်တည်းလုပ်တဲ့အလုပ်က အမှားများဖို့သေချာပါတယ် အခုပြောတာက စကဿကူပေါ်ရိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းအကြောင်းပဲရှိပါသေးတယ် တခြား mediam တွေအတွက်လည်း အများကြီးရှိပါတယ်
အခုလိုပြောလိုက်တော့ Corel & Photoshop လိုအပ်ချက်တောင် ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိတော့ဘူး
နောက်ဆုံးတစ်ခု ဘာလိုလဲဆိုတော့ ဒီဇိုင်နာ ပန်းချီဆရာ အပေါင်းအသင်းခပ်များများ ရှိရင်ကောင်းပါတယ်
သူများပြောပြလို့သိရတာဟာ ကိုယ်တိုင် ဖတ်မှတ်လေ့လာရတာထက် ပိုသက်သာပါတယ်/ ပိုခရီးရောက်ပါတယ်
ဟုတ်ပဗျာ..........photoshop တတ်ရုံလောက်နဲ့ဒီဇိုင်နာလို့မခေါ်နိုင်ပေါင်ဗျ...... photoshop က bitmap specialized လေ....... vector ပိုင်းဆိုရင် corel draw တို့ AI တို့မှအဆင်ပြေမှာဗျ......... layout ဒီဇိုင်နာလုပ်ချင်လည်း......... indesign တို့ Pm7တို့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တွဲသုံးနိုင်မှဗျ..........
ကျနော်ကတော့ Photoshop တခုတည်းတတ်ရုံနဲ့Design သမားဖြစ်ပြီလို ့ထင်ပါတယ်ဗျာ။ တကယ်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ ့တတ်ဖို ့ပဲလို ပါတယ်။ Photoshop ကိုတကယ်ထဲထဲ၀င်၀င်လေ့လာနိုင်ရင်ပဲ တကယ် ပြောင်မြောက်တဲ့ Creation တွေဖန်တီးလို ့ရနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အကုန်လုံးကို အသကုန်ကျွမ်းရင်တော့လည်း အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့ ။ ကျနော်ကတော့ တခုတည်းကိုပဲ တစိုက်မတ်မတ် လေ့လာနိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။ :cool: :cool: :cool:
ကျွန်တော် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ Photoshop သင်တန်းတက်ခဲ့ပြီး အခုချိန်ထိ အဲဒီ Photoshop နဲ့ အလုပ်လုပ်လာခဲ့တာပါ။ ဒါဆို Photoshop က လုံလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကြားထဲမှာတော့ ဆရာသမား အတော်များများနဲ့ တွေ့ခဲ့ရသလို ကိုယ့်ကို အလုပ်က ပြန်သင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပန်းချီ ဆရာတစ်ယောက်ကတော့ Color Theory အကြောင်း သင်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ လုပ်သက်ကြာလာတော့ Indesign နဲ့ Photoshop၊ Illustrator နဲ့ Photoshop အစရှိသဖြင့် တွဲသုံးတတ်လာခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေသူတွေ Graphic Designer လုပ်မယ်ဆိုရင် Graphic Design နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ သင်တန်းကို အနည်းဆုံး ၃ ခုလောက်တက်ခဲ့ကြပါလို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဘာတွေတက်သင့်သလဲဆိုတော့ Photoshop + Flash + 3D သင်တန်းတစ်ခုခုပါပဲ။ သင်တန်းတက်ပြီးတာနဲ့ လုပ်ငန်းဝင်ဖို့ အချိန်မဆွဲဖို့ရယ်။ အိမ်မှာ အမြဲ ထိတွေ့လေ့ကျင့်ဖို့ရယ်က သင်ခဲ့သမျှ အလကားမဖြစ်သွားစေဖို့နဲ့ ပိုတတ်မြောက်လာဖို့ပဲရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေသရွေ့က ကိစ္စမရှိသေးပါဘူး။ ပြည်ပထွက်ခွာ လုပ်ကိုင်တော့မယ်ဆိုရင် အိမ်ပြန်သင်တန်းတက်လို့ မရတော့ဘူး။ အဲဒီမှာပဲတက်မယ်ဆိုလဲ ဈေးက မတန်တဆ။ အချိန်ရရင် ရသလို ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။ ဝါရင့် သဘာရင့်များလည်း သင်ကြားပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။
၁၉၉၉ခုနှစ်လောက်က photoshop ကို စသုံးခဲ့တာပါ။ အဲတုန်းကတော့ photoshop4နဲ့ စခဲ့တာပဲ။ photoshop ကျွမ်းရုံးနဲ့ ဒီဇိုင်နာ ဖြစ်သလားဆိုရင်
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်တွေဖန်းတီဖို့ အမြင်ရှိဖို့ပဲလိုတယ်။ ဒီဇိုင်ဖန်းတီဖို့ အိုင်ဒီယာ မရှိပဲ photoshop ကြီးပဲ ကျွမ်းကျင်ရုံးနဲ့ကတော့ ဒီဇိုင်နာတော့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူများ ဒီဇိုင်တွေကို ကော်ပီလိုက်လုပ်နေရရင် ကော်ပီဒီဇိုင်နာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
Photoshop ကတော့ လူသုံးများတယ်ဗျ။ ဒီဇိုင်ပိုင်းမှာ မပါမဖြစ်ပဲ။ ကျွန်တော်တို့ Autocad သင်ရင်တောင် Photoshop နဲ့တွဲသင်တာတွေ ပါတယ်။ photoshop ကို ကျွမ်းရုံးနဲ့ကို ဒီဇိုင်နာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကလဲ ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အဓိကကတော့ ရုပ်ရှင် ပိုစတာ ၊ ကြောငြာ ပိုစတာ ၊ ဓာတ်ပုံ တွေမှာ အဓိကထားသုံးတာ တွေ့၇ပါတယ်။